Ndị na-emepụta ihe na ndị na - enye ndị na - ese ihe Graphite - China Graphite Electrodes Factory
A na-eji ihe ndị dị n'ụdị elektrik emepụta njikọta abụọ ma ọ bụ karịa n'ime kọlụm. Nzube nke ahụ bụ imezu ojiji nke electrodes na electric arc furn steel steel usoro. Afọ ọnụ, nwere eriri mpụta nke mpụga, bụ ngwaọrụ dị mkpa iji na-agbatị ogologo electrode. Ime nke a na - egbochi ị consumptionụghị ọgwụ na nkụ.
A na-eji komputa kọlụm kọlụm na kọmputa wee rụọ site na Japan, USA, usoro mmepụta nke eserese eserese eserese na-egwepịa, sie, ihe ndị na-egbu egbu, ịkpụ, ịkpụ achịcha, ịme achịcha, mgbali elu nke abụọ, ịmịcha nke abụọ, eserese na ịkpụzi usoro ahụ. nke graphite electrode na onuara na-mere site ugboro atọ impregnation na ugboro anọ achịcha, ihe nke graphite electrode maka ígwè anam bụ agịga esitere Japan na USA.
Ihe eserese sekọndrị bụ ihe dị mkpa eji arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ eletriki eletriki, nke nwere njirimara elele eletriki dị elu, akụrụngwa dị elu, ike ọrụ dị elu, oxidation na mmegide corrosion na oke okpomọkụ. A na-ejikarị ihe eji emepụta ihe eji esere elektriki na EAF (maka nchara nchara), ite ọkụ gbadara agbamgbụ (maka imepụta ferroalloy, silicon dị ọcha, phosphor, matte, calcium carbide wdg. , igwe eletriki na-emepụta carborundum, wdg.